Na-ezochi ihe? Iran jụrụ ịhapụ igbe ojii nke ụgbọelu Ukraine dara dara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Na-ezochi ihe? Iran jụrụ ịhapụ igbe ojii nke ụgbọelu Ukraine dara dara
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Iran jụrụ ịhapụ igbe ojii nke ụgbọelu Ukraine dara dara
Iran mara ọkwa na ọ gaghị ahapụ 'igbe ojii' ahụ site na Ukrainiangbọelu ndị njem Boeing 737 nke Yukren, nke dara n'akụkụ Tehran na Wednesday, ọ bụghị Ukraine, ma ọ bụ Boeing.
N'ịzaghachi ihe mberede ahụ, Boeing kwuru na nkwupụta na ọ dị njikere "inye aka n'ụzọ ọ bụla achọrọ," mana isi nke Civiltù Na-ahụ Maka Ọdụ ụgbọelu nke Iran kwuru na Tehran ga-eme nyocha nke ya maka ihe mberede ahụ. Ọ gbakwụnyere na 'a ga-ekwe' ka ndị ọrụ ụgbọelu nke Ukraine 'nọrọ' n'oge nyocha '.
Dị ka onye ọrụ gọọmentị Iran si kwuo, nyocha banyere ihe mberede ahụ na-aga n'ihu ma amabeghị ya ebe a ga-eziga igbe ojii maka nyocha.
Otu ụgbọ elu Boeing 737 nke ndị Ukraine International Airlines na-arụ ọrụ dara obere oge ka ọpụsịrị n'ọdụ ụgbọ elu Imam Khomeini International na Tehran na mbido Wenesde, wee gbuo mmadụ 176 niile nọ n'ụgbọ ahụ. Na mbu, Ukraine tụrụ aro na ihe mberede ahụ bụ n'ihi ọdịda igwe, mana mechara kpochapu nkwupụta ya.
Airgbọ elu ndị Ukraine kwuru na ụgbọ elu ahụ "nọ n'ọnọdụ dị mma" tupu ụgbọ elu ikpeazụ ya si Tehran gaa Kiev, Evgeny Dykhne, onye isi ụlọ ọrụ ahụ gwara ndị nta akụkọ na Kiev. Planegbọ elu ahụ, nke a kọwara dị ka otu "kachasị mma" n'ụgbọ mmiri nke ụlọ ọrụ ahụ, emeela nyocha nanị ụbọchị abụọ tupu.
Onye isi ala Ukraine bụ Volodymyr Zelensky akpọọla ndị mmadụ ka ha zere ịkọ nkọ banyere ihe nwere ike bute ihe mberede a. Mịnịsta okwu mba ofesi Ukraine gosipụtara na ya na onyeisiala ya nke Iran, Mohammad Javad Zarif nọ na-akpakọrịta, na mba abụọ ahụ ekwenyela ịhazi mbọ ha iji chọpụta ihe butere ọgbaghara ahụ "dị egwu".
Mịnịsta Ofesi nke Ukraine gosipụtara na n'ime ndị nwụrụ n'ihe mberede ahụ na Wednesde bụ ndị Iran 82, ndị Ukraine 11, ndị Canada 63, ndị Afghanistan anọ, ndị Jamanị atọ, ndị obodo Britain atọ na ndị Sweden iri.